Shaampiyoons Liigii: Xiyyaaronni deggertoota kubbaa miilaa samii UK dhiphisaan - BBC News Afaan Oromoo
Deggertoonni kubbaa miilaa Waancaa Shaampiyoonsi Daandii Xiyyaaraa Biriitish fayyadamuun gara Maadiriiditti imalan samii biyyattii dhisaa jiru. Lakkoofsi balaliii xiyyaaraas seenaa keessatti kan kanaan dura galmaa'ee hin beekne ta'uu mala jedhamee eegamaa jira.
Tapha Shaampiyoons Liigii Aqurooppaa Ispeenitti bor Tootinhaamiifi Liiverpuul gidduutti gaggeeffamuuf Jimaata har'aa qofa balaliin xiyyaaraa 9,000 Maadiriiditti taasifameera.
Balaliin 9,000 Jimaata taasifame kan kaanaan dura Caamsaa 25, 2018 taasifame 8,880 caaluudhaan galmee haaraa ta'a jedhameera.
''Lukaas Mooraaf siidaan dhaabbachuu qaba''
Mohaammad Saalaan Baalon d'Oriif kaadhimame
Sanbata osoo Tootnhaamiifi Liiverpuul waancaa eegamu kanaaf walitti hin dhufiin, xiyaaronni namoota dhuunfaan balali'an (chartered flights) fi jeettonni dhuunfaan hedduun akka heddummaatan to'ataan tiraafikaa balalii Nats ni dubbata.
Deggertoonni yeroo imala isaanii gara Maadiriiditti eegalan fuula miidiyaalee hawwaasarratti maxxansaa jiru.
Balaliin xiyyaaraa gara magaalaa guddittii Ispeen kanatti taasifamu biyyoota hedduu keessa darbuun achi qubatu.
Nats akka jedhutti dhuma torbee kanarra balaliin biroo 800 ta'an ni eegamu garuu lakkoofsi kun dabaluu danda'a sababiin isaas namoonni hedduu tikeettii hin kutatiin waan jiraniif xiyaarota dhuunfaan deemu jedhamee eegama.
Xiyyaarota akka dhuunfaatti balali'an hedduu keessaa walakkaa kan ta'an kallattiidhaan Buufata Xiyyaaraa Liiverpuulirraati.
Miseensi Mana Maree warra leellistoota jedhamanii (Conservative) kan ta'aniifi deggeraa Tootinhaam kan ta'an Tracey Crouch aanga'oota kumaatamaan lakkaa'aman gara Maadiriiditti imalan keessaadha.
Dubbi humaan Nats akka jedhutti, xiyyaarota lakkoofsaan hanga eegame ol imalan kanarraa kan ka'een yeroo kamiyyu caalaa samiin dhiphaateera.
Kanaaf, buufatawwan xiyyaaraafi daandiiwwan xiyaaraa waliin ta'uudhaan, kan dandeenyu hunda ni taasifna. Namoonni akkaataa barbaadameen dorgommii eegamu kanarratti akka argaman taasifnee nagaanis akka mana isaaniitti deebiyan ni taasifna jedhan.
"Buufatawwan xiyyaaraa tokko tokko keessa dandeettiin jiru muraasa waan ta'uuf balalii xiyyaaraa akka boodatti harkifatu taasisuu danda'a. Kanaaf, torban kun torbee rakkisaa akka ta'uu malu shakkiin hin jiru."
Nats lakkoofsi kanaan dura ture kun cabee balaliin xiyaaraa yeroo kanatti hedduu ta'e galmaa'uun "carraa gaariidha jechuun lakkoofsi waliigalaa galmaa'an Wixata ifa goona jedhe.
Manaajeroonni kilaboota lamaanii qophii taasisaa jiran cinaattis miidiyaaleef ibsa kennaa jiru.
Pochetiinoo warra Tootinaamis ta'e Kiloop warra Liiverpuul taphichi seena qabeessaafi kan seenaa keessatti yeroo muraasa nama mudatudha jedhan.
Taphattoonni kilaboota lamaaniis miidiyaalee hawaasummaa dabalatee deggertootaafi jaallatoota isaaniif ergaa dabarsaa jiru.
Torban kanaa Liiverpuul, Arsenaalii fi Manchister Yuunayitidiif torban gaarii taha jechuun Chelsiin garuu ni mo'ama jedha: Tilmaama Laawuroo